Koeman oo ka hadlay iscasilaadii Bartomeu ee madaxtinimada Barcelona… Muxuuse ka yiri Ansu Fati?? – Gool FM
(Barcelona) 30 Okt 2020.Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa sheegay in uusan garaneyn waxa ka dhalan kara iscasilaada madaxweynihii hore Josep Maria Bartomeu, taas oo muujineysa in isbadalo qaar ay dhici karaan, laakiin uusan xooga saarin arintaan.
Madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa ku dhawaaqay, inuu iska casilay xilkiisa, maalmood kahor sababo la xiriira culeysyo waaweyn oo la saaray, ha ahaato dhanka ciyaartoyda, taageerayaasha ama xitaa warbaahinta.
Haddaba Ronald Koeman oo maanta ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu kaga hadlay is casilaadii madaxweynihii hore Josep Maria Bartomeu:
“Ma garanayo, gacmaheyga kuma jiraan, waxaan si adag uga shaqeynayaa sidii aan u hormarin lahaa kooxda, waxaan sugi doonaa bal inaan arko haddii ay jiraan wax isbadalo ah, laakiin ma dareemayo cabsi, waxaan ogahay in labada musharax ay ka hadli doonaan, mashaariicdooda waan arki doonaa”.
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa ammaan kala duldhacay xiddiga da’ada yar ee reer Spain Ansu Fati, sababa la xiriira munaasabadda dhalashadiisa 18-aad laakiin isla waqtigaas wuxuu muujiyey baahida loo qabo inuu maskax ahaan ka fiicnaado.
Ronald Koeman oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri:
“Wuu sii fiicnaanayaa, shalay waxaan kala hadlay mowduuca diirad saarida, waa inuu ku fiicnaadaa dhinacan, Waa inaan isaga caawinaa sidoo kale, waa da’ayar aad u fiican, waana inuu diyaar u ahaadaa inuu koro maalin kasta”.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa sheegay in uusan garaneyn waxa ka dhalan kara iscasilaada madaxweynihii hore Josep Maria Bartomeu, taas oo muujineysa in isbadalo qaar ay dhici karaan, laakiin uusan xooga saarin arintaan.
“Ma garanayo, gacmaheyga kuma jiro, waxaan si adag uga shaqeynayaa sidii aan u hormarin lahaa kooxda, waxaan sugi doonaa bal inaan arko haddii ay jiraan wax isbadalo ah, laakiin ma dareemayo cabsi, waxaan ogahay in labada musharax ay ka hadli doonaan, mashaariicdooda waan arki doonaa”.